MIND & CALAAMADAHA CUDURKA: Martin Vrijland
Doodda: 'DMT ma kuu fiican tahay ama ma'aha?' Ninkan ayaa si lama filaan ah u arkay jilitaanka
Filed in XADGUDUB & DHAGASHADA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 13 August 2018	• 2 Comments
Inkastoo in aan article hore oo ku saabsan DMT, walax ku jira saaridda xidid-sida ayahuasca iyo iboga, ayaa tilmaamay in aad habayn shaqeynayaan transceiver on code Saturn ah, waxaa ka muuqan calaamadaha kaydkii dadka Waxyaabaha muujinaya dhabta ah waxay bilaabaan inay arkaan iyada oo loo marayo isticmaalka DMT. [...]
Ma xakamayn karnaa natiijada jilitaanka this?
Filed in SIMULATION, XADGUDUB & DHAGASHADA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 8 August 2018	• 9 Comments
Inkasta oo aan haysto da'da yar ayaa mar hore in la sameeyo ma aha kuwo Rumayn Ilaah jecel, laakiin si gaar ah u soo jeestay inay ka cabsadaan, waxaa ii fascinates sida balaayiin qof ayaa ku mashquulsan la nidaamka aaminsan iyo ha u qeexaan noloshooda oo dhan iyada oo loo marayo. Hadda ma aha oo kaliya rumaysadka xagga Ilaah, Allah, Ciise, [...]
Waxyeellada DMT ee ayahuasca iyo waxqabadka qanjirka pineal
Filed in XADGUDUB & DHAGASHADA	by Martin Vrijland	on 6 August 2018	• 5 Comments
Waxaan si joogta ah u soo jeedinayaa inaan isku dayo walaxda DMT sida qaabka ayahuasca ama wakiilo kale oo leh DMT. Waxay u muuqataa in maaddadani ay kicineyso qanjirka pineal, taas oo keentay nooc ka mid ah khibradaha udhaxeeya dhimashada iyo haysashada dhammaan noocyada waayo-aragnimada jir ahaaneed. Hadda waxaan isku dayey in aan daawooyinka qaar [...]
Yaa abuuray Lucifer iyo maxay yihiin jinniyo, jinni ama qaansooyinka qaabka simanaanta?
Filed in SIMULATION, XADGUDUB & DHAGASHADA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 5 August 2018	• 6 Comments
Gaar ahaan ka soo xagal ka mid ah kuwii la aragtida Christian ama Islamic aan si joogto ah u hesho su'aasha ah: Haddii aad u malaynayso in caalamka uu abuuray jilitaanka ah Luciferian, kuwaas oo abuuray arooryadow iyo sida ku saabsan jinniyo kuwa, djinns, archons? Waxaan jeclaan lahaa inaan caddeeyo qodobkan waxaanan sidoo kale [...]
Miyuu farsamooyinka buluuga ah ee Google ee loogu talagalay xaqiiqada qotoda dheer (AR) caddaynaysaa aragtida ah in caalamku yahay jilid?
Filed in SIMULATION, XADGUDUB & DHAGASHADA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 5 August 2018	• 4 Comments
Ka dib markii ay qoraallo yar oo ku saabsan fikradda ah in adiga iyo aniga aan ku noolahay xaqiiqo muuqaal ah, jawaabaha badani waxay muujinayaan in akhristayaashu aad u naxsan yihiin. Sida aan ku sheegay in mabda 'ah "entanglement galmada" arrin lagama maarmaan ah in Einstein ee degaanka aragti iyo sidoo kale waxa dhantaala xawaaraha iftiinka (sida jirka soohdinta jirka), [...]
Dad badan iyo dad badan ayaa bilaabay inay arkaan inaynu ku noolnahay jilid: tanina waa sababta
Filed in SIMULATION, XADGUDUB & DHAGASHADA	by Martin Vrijland	on 3 August 2018	• 9 Comments
Rizwan ("Riz") Virk waa ganacsade guuleysta, maalgashi, qoraaga ugu fiican, horjoogaha warshadaha fiidiyoowga iyo soo saaraha filim madaxbannaan. Iyada oo uu waayo-aragnimo ee kulan video online iyo daraasadda waxaa ka mid ah physics galmada iyo dhaqdhaqaaqa diinta, ayuu ku soo gunaanaday in ay tahay aad u badantahay yimid in ciyaar dhab dalwaddii multiplayer live. [...]
Maxaan sameyn karnaa si aan u xallinno dhibaatooyinkeena? Tallaabo qallafsan oo fog!
Filed in SIMULATION, XADGUDUB & DHAGASHADA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 1 August 2018	• 4 Comments
Fiidiyowyada hoose waxay bixiyaan aragti yar oo ku saabsan fikradda isugeynta mugga. Tarjumadda Ingiriisiga ah ee tani waa darajo ku salaysan. Haddii aad daawato fiidiyowga hoos ku qoran waxaa laga yaabaa inaad dareentid xoogaa dareen ah oo ku saabsan ereygan micnaheedu yahay. Ereyga ku saleysan miisaaniyadda ayaa faa'iido leh in la fahmo, sababtoo ah fekerkaygu wuxuu leeyahay wax badan oo ku saabsan jiritaanka. Maqaalkii hore ee aan soo [...]
Cirku waa jilid: dhammaan diinta, nidaamka asaasiga ah waa khiyaamo
Filed in SIMULATION, XADGUDUB & DHAGASHADA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 30 July 2018	• 22 Comments
Ma ogtahay in wax kasta oo aad u maleyneyso oo kaliya marka la arkay? Tani waxay muujinaysaa tijaabin tijaabo ah oo ku dhowaad hal sano oo la yiraahdo laba xabbo oo labajibbaaran (fur furan). Quantum physicists caalamka ayaa qabatay tijaabadan boqolaal jeer, sababtoo ah waxa ay keentay gaalnimo aad u badan isla markaana waqti isku mid ah oo la yaab leh. Waa baadhitaan ay [...]
Sawirada Nabiga (nabadgelyo korkiisa ha ahaato) iyo tartanka cartoon ee Geert Wilders
Filed in XADGUDUB & DHAGASHADA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 27 July 2018	• 12 Comments
Waxaa ku dhuftay oo igu taal oo ka mid ah khudbado by Sheikh Imran Hosein, Waxaan jeclahay in aan maqli waayo, falanqaynta dhacdooyinka taariikhda iyo hadda la xiriirta waxsii Islamic in Muslimiinta ku dhowaad marnaba xusin magaca Nebi Muhammad, iyo haddii ay sidaas u yeelaan waxay ku darayaan weedh dhan. [...]
Ciise waa badbaadiyaha qof kasta oo naftiisa u bixiya! Mise Islaamku waa sida kaliya ee dhabta ah?
Filed in XADGUDUB & DHAGASHADA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 26 July 2018	• 48 Comments
Maanta waxaan soo diray maqaal ku saabsan caruurta yar yar traumatizing iyo carruurta kuwaas oo ku shaqeeya ee aan si fiican u suuxinta ilaa galay konton konton ah 80 sababtoo ah habka dareemayaasha aan doonaynin in la horumariyo. Waxaan kugula talinayaa in aad akhrisato maqaalkan ka hor intaadan sii wadin. Xaqiiqdii, waxay ku saabsan tahay jirdil. [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.400.606